नानीहरुलाई सडकमा खेल्न नदिनू
पग्ला कुकुर निस्केको छ
होशियार ! जुनसुकै बेला टोक्न सक्छ।
आँखा निक्खुर रातो छ
पुच्छर तल झारेको छ
राल तप ! तप !! तप !!! चुहाउँदै कुदिरहेछ जताभावी।
दिमाग छ तर छैन बराबर
बिचार अस्थिर छ
पाइलाहरु अस्थिर छन्‌।
पानी देखाएर तर्साउन नखोज्नू
यो हाईड्रो फोबिया होइन
यो त आफ्नो अस्तित्व बचाउन पग्ला बनेको हो
त्यसर्थ याद गर्नु
यसले कुनै पनि क्षण टोक्न सक्छ
याद गर्नु ! सडकतिर जताभावी नहिड्नू।
मान्छेको बस्तीमा धावा बोल्दै निस्केको
पग्ला कुकुरहरुको जमात बड्दैछ
टोकेर आफ्नो जमातमा तान्न सक्छ
पानी देखाएर भगाउन नखोज्नू
यो हाईड्रो फोबिया होइन।
बरु रॉंको बालेर
मौका परे थुतुनामा पोलिदिनू
झीर तताएर आँखा फोरिदिनू
किन कि यो पग्ला कुकुर हो
कुनै क्षण तपाईँलाई पनि टोक्न सक्छ ।
Posted by सरोकार at 7:35 PM0comments
Posted by सरोकार at 7:28 PM0comments
के नै पो गर्छस्‌ र तैंले?
मुख सिलाई दे
बोल्नु छोड्‌दिनँ अन्त
कान बुच्चाई दे
देख्न मरे छोड्‌दिनँ
तेरो पाखण्डी अनुहारको
नाङ्गो नक्सा त म
आँखा चिम्म गरेरै बनाइदिन्छु।
के नै पो नाप्छस्‌ र तैंले?
तँलाई थाह छैन
तैंले टेकिरहेको भुइँको
आगो लगा कि डढेलो सल्का
तर भुइँमुनिको जराबाट
तेरो रावण-कथा भन्न
म पटक पटक उम्रिरहने छु
हेर्‌ मात्र तैंले
बिजुवाको आँगमा सोगा उत्रेर
सत्ये सत्ये अब
के के पो बक्दिनँ र !
(कालेबुङमा च्यानलहरू बन्द गरेपछि। गणतन्त्रको निम्ति भूपेन्द्रको कविता)
Posted by सरोकार at 8:24 PM0comments
मैले पनि कस्सेर दुई झापट दिएँ।
उपाय केही थिएन मसित। जस्तो भएपनि बोल्नुको भाँति हुनपर्छ मान्छेको। अहिले सामान्य भएको छु- तथापि कन्सिरी तात्तिएर आउँछ उसलाई सम्झँदा।
बसोस् माइतीको घरमा।
मैले मात्रै रिस पिउनु ? उसले पनि पिओस्।
रिसले मात्ने बानी होस् उसलाई पनि।
मनले अझसम्म झापट कस्सिरहन्छ – उसलाई।
झगडा हुनलाई ठूलो कारण चाहिँदैन। कति स-साना कुराले हिर्काउँछ उसले।
उसको कुरा जहिले पनि माथिबाट हुनैपर्छ।
अपत्यारिलो कुराको बहसलाई पनि पचाइदिनुपर्छ।
हद हुन्छ। हददेखि बाहिर कुरा गर्नु त हुँदैन नी।
जब्बरजस्ती र हठीपनको पनि सिमा हुन्छ।
कुन्नि कस्तो दिन र साइतमा उसका बोलीका गोलीले हाम्रो मायाको अग्लो पर्खाल गर्ल्याम्म ढाल्छ।
परिणाम – हप्ता दिन। कोहीबेला महिनादिनसम्म राम्रो सँग बोलचाल नै हुँदैन।
आज हप्ता दिन पो भएछ। फोन् पनि गर्दिनन्।
आउदिनन् त। मिसकल गरूँ कि सम्झे, होस् गर्दिनँ पनि सम्झै एकैचोटि।
ऐना हेर्छु – केस लामो भएछ। दाह्री खौरन्छु।
उसका रिसहरू सम्झन्छु सबै पग्लिएर चिसो भएको पाउँछु मायाको धङ्धङीले ।
एक्लै हाँस्छु ऐना हेर्दै – आज मेरो चामे हुने दिन रहेछ।
Posted by सरोकार at 8:53 AM0comments
गाउँको नेगेटिभ बोकेर हिँडिरहने शहर
आवश्यकता अनुसार प्रिन्ट निकालिबस्छ कवितामा
शहरले खिचेको गाउँको नक्शामा
समेटिनै सक्दैन गाउँको मन।
गाउँको रुखमा चराले लाएको गुँड
भत्काइरहन्छ छुल्याहा केटाकेटीहरु
तहसनहस भएको आफ्नै अनुहार हेरेर
लाचार मुस्कुराइबस्छ गाउँ ।
भालेको डाकसितै कोइलीले अलापेको राग
गाउँकै भाकामा सुनिन्थे उहिले
विश्व-बजारको हिसाब-किताब सुनाइबस्छ
अचेल गाउँका गीतहरु ।
गज्जबले तिर्खाएको गाउँ
पधेराको रसिलो पानी
धीत मरुञ्जेल पिउँछ सपनामा ।
कुतकुतीहरुको ह्यङओभर मेटाउन
कुनै तरुणीको बैँससित इत्रीन खोजिबस्छ
भर्खरै ईन्टरनेटमा पोर्नोसाईट हेरेर फर्केको गाउँ ।
शहरले गाउँ बेचेको कथा सुनेर दिक्कै बन्छ
हरदम बिक्री भैरहन्छ
लेबल टाँसेर राखिएको गाउँको नक्शा
शहरको शोकेशभित्र गाउँको भूगोल तर शहरले बुझ्दैन
शहरको ईतिहास डल्लै थाहा छ गाउँलाई ।
Posted by सरोकार at 8:12 AM0comments
कुन दिन बन्द हुने हो त
हाम्रो कमान चाहिँ-
दिन गन्दै बसेको हर्कबहादुरसँग
अस्सीको चिह्नारीको लड़ाइँमा
झण्डै गएको एउटा अधमरो ज्यान छ
झण्डै लुटिएकी एउटी लुती स्वास्नी छे
र झण्डै जलेको चुपचाप घर छ
गाईलाई बिहान घाँस ल्याइवरि
एकपटक छोरीको अनुहार हेर्छ
साँझ घर आउनअघि
बैदारको हेपुवा अनुहार हेर्छ
चियाका गाछहरूसँगै हुन्छ
ऊ देख्दैन चियागाछको अनुहार
चियागाछमा सधैं हर्कबहादुर
हेपाइ, हप्की र गाली मात्र हेर्छ
चियागाछमा उ बरू बड़ेमानको ताला देख्छ
हतियारझैं ढुङ्गा देख्छ
खिया लागेको खुकुरी देख्छ
पुरानो धनुकाँड़ देख्छ
सीतारामको हुटेलमा पाइने झीँगासरिको सिङ्गाड़ा देख्छ
राशनको डौंठे चामलको रातोरातो भात देख्छ
छोराको स्कूलको फी देख्छ
दम बढ़्ने आमाको दबाइको पोका देख्छ
श्रीरामछाप खैनीको गुलाफी प्याकेट देख्छ
चियाका गाछहरूसँगै बित्छ
चियागाछमा हर्कबहादुरले देख्छ
उसको बाजेबोजुको खुन
उसको आमाबाबुको पसीना
उसको आफ्नै हातको ठेला
र स्वास्नीका पटपटी फुटेका औंलाहरू
कति-कति झण्डैहरू होलान्
Posted by सरोकार at 9:49 PM0comments
रेखा कोरिएर आउँछ लाज
र कस्सैलाई सुइँको नदिई
च्याप्प समाउँछ यसले एकैक्षण
आँखाका दुईटै मुटुलाई।
आदम र हव्वाले बगैँचाको फल खाएकै क्षणदेखि
यसले आफूलाई चिनाएको हो।
आचार्य भरतमुनिको रससूत्रको कापमा
व्यभिचारी भाव बनेर फुलेको छ यो एउटा सुनाखरी।
सुन्दरी ठिटीहरूका गालाको पाखाभरि
सौन्दर्यको रगत बनेर फुलेको छ यो एउटा गुराँस।
सभ्यताको मोटो जीउमा
यसैले भरेका मासुहरू छन् ताजा।
यसले देखाउनै खोजेको चाहिँ
शिष्टाचारको विज्ञापन मात्र हो।
लाग्नु पनि खराब
नलाग्नु झन खराब।
Posted by सरोकार at 9:34 PM0comments